Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zaseMartinique Breaking » Izibhelu ezinodlame ze-COVID-19 zasakazeka zisuka eGuadeloupe zaya eMartinique
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • I-Caribbean • Ubugebengu • France Izindaba Ezintsha • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Izindaba zaseMartinique Breaking • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
Abatelekile kubikwa ukuthi bacasulwe ukungamukelwa ngumbusi waseMartinique ekupheleni kosuku lwabo lokuqala lokubhikisha.
Izolo, izinyunyana zabasebenzi eziyi-17 esiqhingini esisendaweni yaseFrance iMartinique zicele ukuthi kube nesiteleka esijwayelekile ukukhombisa ukuphikisa kwabo igunya lokugomela i-COVID-19 labasebenzi bezokunakekelwa kwempilo kanye nokuphoqelelwa kokudlula kwezempilo kwe-coronavirus yaseFrance.
Kodwa imibhikisho yaphenduka ngokushesha Guadeloupizibhelu ezinodlame ze-e-style ezinemibiko yamaphoyisa kanye nezicishamlilo phakathi MartiniqueInhloko-dolobha yase-Fort-de-France idutshulwa.
Isimo sishube kakhulu ngesikhathi abatelekile kubikwa ukuthi bacasulwe ukungamukelwa wumbusi waseMartinique ekupheleni kosuku lwabo lokuqala lokubhikisha.
Yize kungabikwanga muntu olimele, abezomthetho nabezimo eziphuthumayo badutshulwe kaningi ngesikhathi bengenelela bacisha amalangabi emigwaqweni emikhulu yomphakathi edolobheni laseFort-de-France izolo ebusuku.
Ngokuvumelana ne MartiniqueOkhulumela uMnyango wezokuPhepha koMphakathi uJoël Larcher, amaphoyisa kanye nabezicishamlilo badubuleke ngezibhamu, kanti izimoto eziningi zashiswa phakathi nezinxushunxushu zasebusuku.
Ababhikishi bavale imigwaqo ezungeze isiqhingi sase-French Caribbean futhi benze izimfuno eziningi zikahulumeni, okuhlanganisa nokuphela kwegunya lokugomela i-COVID-19 labanakekeli, kanye nezicelo ezibanzi ezifana nokunyuswa kwamaholo kanye nokwehliswa kwamanani kaphethiloli.
Udlame lwase-Martinique selusabalele lusuka eduze Guadeloupe, lapho kwehle khona isiphithiphithi ngemuva kokuthi izinyunyana zabasebenzi zihlele ukuphuma ngesonto eledlule ukuze ziphonsele inselelo imikhawulo ye-COVID-19 lapho, okuhlanganisa nokwethulwa kwemishini yokulwa ne-coronavirus eyimpoqo kubasebenzi bezempilo.